ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားဥတု - YCD-HG အမျိုးအစား China Manufacturer
ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ -YCD-HG,ကြယ်ပွင့်သော့ခတ်လေ Valve,ကြယ်ပွင့် - အမျိုးအစားလေ Cooler
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ -YCD-HG,ကြယ်ပွင့်သော့ခတ်လေ Valve,ကြယ်ပွင့် - အမျိုးအစားလေ Cooler
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား Ash ကိုကယ်ဆယ်ရေး Valve > ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားဥတု - YCD-HG အမျိုးအစား
 ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားဥတု - YCD-HG အမျိုးအစား
စတား discharge ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးစနစ်၏အရေးကြီးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရွေးချယ်ရေးနှင့်အရည်အသွေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါချ device ကိုခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်နှင့်အသေးငယ်တဲ့ဘောဇဉ်ပစ္စည်းများမှကျယ်ပြန့်အသုံးချဖြစ်ပါတယ်။ မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးစနစ်၏အထူးချကိရိယာများသည်အတိုင်း, ကြယ်ပွင့် type ကိုချသန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး၌ကြီးစွာသောအခန်းကဏ္ဍ, ဒါကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရန်အဖြစ်ငါတို့ကိုဤမျှအသေးစိတ်အတွက်ကြယ်ပွင့် type ကိုချ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးများတွင်အမှား။
အဆိုပါ YJDA ကြယ်ပွင့် type ကို discharge (အနားကွပ်ပါးစပ်စတုရန်းဖြစ်ပါသည်) နှင့် YJDB ကြယ်ပွင့် type ကို discharge (အနားကွပ်ပါးစပ်ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပါတယ်): 1, ကြယ်အမျိုးအစား discharge အဆိုပါအနားကွပ်ဆက်သွယ်မှုဆိပ်ကမ်းအတိုင်းသမားရိုးကျပုံစံသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အနားကွပ်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးစုံကိုလည်းဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ 2, အလွှာပိတျထားသောများ၏အရေအတွက်အတိုင်း: တစ်ခုတည်းနှစ်ချက်, သုံးအလွှာ။ 3, အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ပုံအရသိရသည်နဲ့ကိုအသုံးပြုသည်: ယေဘုယျ, ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်။
ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား disloaders ဘို့အနားကွပ်ကွန်နက်ရှင်သည် Modes နှစ်မျိုးအဓိကအားဖြင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစတုရန်းဆိပ်ကမ်းကိုတစ်ဦးကအမျိုးအစားနှင့်ပတ်ပတ်လည်ဆိပ်ကမ်းကို B ကိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစတုဂံများနှင့်ပြာမှုန်ရိနာစွဲအဆို့ရှင်၏အခြားအထူးသတ်မှတ်ချက်များကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
1, ဆန့်ကျင်ကဒ်ကြယ် discharge: ဆန့်ကျင်ယိုနို့တိုက်ကျွေးရေးဒီဇိုင်းချမှတ်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာသည်နှင့်အညီရှင်းလင်းရေးညှိ, အခါလိုအပ်သော, V ကိုအမျိုးအစားရဟတ်ဘက်လိုက်မှုအမျိုးအစားကိုယျခန်ဓာကိုအသုံးပြုပါ။
2, ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ကြယ်ပွင့် type ကို discharge: အကျယ်ပြန့်စုတ်ယူခြင်းများတွင်အသုံးပြုတံခါးပိတ်ရဟတ်၏အသုံးပြုမှု, ဖိအား pneumatic conveying စနစ်, ထိရောက်စွာ pneumatic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသေချာ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်လျှော့ချပေးပါတယ်။
3, အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ကြယ်ပွင့် type ကိုချ: ပြင်ပတင်ယန္တရား၏အသုံးပြုမှု, ပစ္စည်းနှင့်အတူအဆက်အသွယ်၏ box ကိုစိတျအပိုငျးမြား၏ slurry running အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြင့်မားသောအပူချိန်များနှင့်သာမန်အလုပ်သဖြင့်မထိခိုက်ဝက်ဝံနှင့်ရေနံတံဆိပျကို system ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စက်၏ဤအမျိုးအစားဝံနှင့်ရေနံတံဆိပျကို system ကိုကျူးကျော်သည်ဤပစ္စည်းများကိုရှောင်ရှား, သတ္တုအမှုန့်နှင့် ultrafine အမှုန့်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လည်းအထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။
4. တိုက်ရိုက်ပေးပို့ကြယ်ပွင့် type ကိုချ: အညီအမျှအဆိုပါသယ်ဆောင်ပိုက်ပါးစပ်ဖို့အလှည့်ဓါးအတွက်ပစ္စည်းမှုတ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဓာတ်ငွေ့တံဆိပျကိုသော့ခတ်ရန်အထွက်တက်ဆင်း mode ကိုအသုံးပြုပါ။
5. ဆန့်ကျင်ကြယ် discharge ကပ်: အထူးဒီဇိုင်း, သာမန်အားဖြင့်ကပ်ရန်လွယ်ကူပြီးစိမ်းရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်။
6, အရေအတွက်ကြယ် discharge: အရေအတွက်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ဖို့ရဟတ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်သည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ -YCD-HG , ကြယ်ပွင့်သော့ခတ်လေ Valve , ကြယ်ပွင့် - အမျိုးအစားလေ Cooler , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ YJD-B က , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချက Round , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချကော်-4 , ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား discharge